Indawo yase Sharp Run- Millersburg/Berlin, OH
Uvimba sinombuki zindwendwe onguBrenda
Wamkelekile kwi "The Barn at Sharp Run," indawo entsha yokulungiswa kwefama yesitayile songcakazo kwipropathi yethu. Oku kuhlala ukuya kwiindwendwe ezi-6. Yonwabela imbonakalo entle ukusuka kumgangatho okanye uhambe uhambo kwiindlela zelizwe. Sibekwe kumbindi weLizwe lama-Amish eHolmes County phakathi kweMillersburg neBerlin. I-rustic barn yethu iqhayisa ngezinto eziluncedo zale mihla kunye nezinto ezinomtsalane ezikufutshane kwindawo yakho yokuya eholideyini.
"I-Barn e-Sharp Run" inesicwangciso somgangatho ovulekileyo. Zimbini iindawo zokungena, zombini zinezinyuko, esona sixa sincinci zizitepsi ezibini. Uya kuba neshedi uwedwa. Ikhaya lethu likwipropathi efanayo neshedi, malunga neemitha ezili-100 kodwa aliqhagamshelwanga kwisisele nangayiphi na indlela. Ungasibona sisihla sihamba nabantwana bethu bedlala phandle. Singathanda ukuthi "hi" kodwa akukho sibophelelo. Sine-beagle yesilo-qabane esinobubele esingakubulisa kunye neekati ezimbalwa.
Indawo yethu ibekwe kwindawo yama-Amish. Uya kubona iibhayisekile ezininzi, iibhugi, kunye neetrektara ukusuka kumgangatho. Ukuba unethamsanqa usenokubona abamelwane bethu bama-Amish besiya ecaweni ngeCawe kusasa. Siyimizuzu ukusuka kwiFama yaseHershberger kunye neBakery, eyindawo enomtsalane kakhulu kule ndawo.
Ikhaya lethu likwipropathi enye ne "The Barn." Singakuvuyela ukukunceda kangangoko sinako ngamaxesha onke. Sinesilwanyana saselwandle esinobuhlobo ngaphandle esinokukubulisa xa sifika.